लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका काम पूरा गनेर् योजना छ | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका काम पूरा गनेर् योजना छ
लामो समयदेखि अल्झिएर रहेका काम पूरा गनेर् योजना छ
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता September 20, 2017	0 186 Views
अध्यक्ष– घो र ाही नगर विकास समिति
सरकारले गत साउन ४ गते घो राही नगर विकास समितिको अध्यक्षमा बसन्त चौ धरीलाई नियुक्त ग¥यो  । स् थानीय तह लागु भइसके पछि नगर विकासको काम समे त स् थानीय तहले गनेर् भनी संविधानमै व्यवस् था भए पनि नगर विकासमा नया“ पदाधिकारी नियुक्त ह“ुदा के ही टिकाटिप्पणी पनि भए । तथापि नया“ संरचना अनुसार स् थानीय तहमा ऐ न, कार्यविधि नबन्दासम्म पुरानै संरचनाले काम गर्न पाउनुपनेर् पदाधिकारीहरुको धारणा पनि छ । यसै सन्दर्भमा नवनियुक्त घो राही नगर विकास समितिका अध्यक्ष बसन्त चौ धरीस“ग नगरको विकासका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ – सम्पादक
नगर विकासका गतिविधि के कस्ता भइरहे का छन् ?
घो राही नगर विकास समितिको अध्यक्ष भएको धे रै भएको छै न । पहिलो कुरा त यहा“को वातावरण बुझ्न के ही समय खर्चिनुपनेर् भयो  । त्यस् तै नगर विकासको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्रै रहे र हुने कामहरुलाई निरन्तरता दिने काम भइरहे को छ । नगर विकास र राज्यका के ही नियम बाझिएको र विरो धाभास जस् तो भएका कारण पनि के ही काममा समस् या दे खिएको छ । ती समस् याकै बावजुद पनि पुराना कामहरुलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मा म लागे को छु । ०३५ सालदे खि यताका के ही काम अल्झिएको पाइएको छ । त्यस् ता कामहरुलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने मा म छु । जस् तो मो हीका समस् या आएका छन् । त्यस् तै बाटो खो ल्ने विषयमा भएका विवादका समस् या पनि छन् । त्यस् तै नवलपुर जग्गा विकास आयो जनामा पनि के ही काम बा“की नै छन् । कतिपयका जग्गा फिर्ता, क्षतिपूर्ति दिने कुरा र कटिङ, फिलिङका काम पनि गर्न बा“की नै छन् । यी सबै कामहरुलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउनका लागि कार्यसमिति, बो र्डको बै ठकबाट निर्णय गराउनुपनेर् भएकाले के ही ढिलाइ भएको छ । त्यही भएर मै ले यही असो ज ६ गते बो र्डको बै ठक बो लाएको छु । त्यो बै ठकबाट निर्णय गराएर काम अगाडि बढाउने यो जनामा हामी छौ ं ।
विरो धाभासपूर्ण अवस् था छ भन्नुभयो । समितिलाई काम गर्न गाह्रो भएको हो ?
त्यसो हो इन । नगर विकासलाई जुन काम र जिम्मे वारी दिइएको थियो , त्यो जिम्मे वारी अहिले पनि यथावत नै छ । तर स् थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरु आइसक्नु भएको अवस् थामा नगर विकासको काम छै न भन्ने बुझाइ अहिले पनि छ । तर त्यो समस् या हो इन । खास विरो धाभासको कुरा के हो भने
नगर विकासले प्लानिङलाई अगाडि बढायो  । मन्त्रालयले स् वीकृति दिएर बाटो समे त स् वीकृत ग¥यो  । अहिले चाहि“ सरकारले बाह्य जिल्ला जो ड्ने सडकहरु मापदण्ड भन्दा बाहिर छन् । भन्ने कुराहरु आइरहे को छ । जस् तो यही नवलपुरको कुरा गनेर् हो भने २५
मिटर छो डे र, दुबै छे उतिर साढे दुइ÷साढे दुइ मिटर थप छो डे र
काम अघि बढे को अवस् थामा अव सरकारले ती सडक ४३ मिटरको कुरा गरिराखे को छ । यसले गर्दा त्यो प्लानिङमा बे चिएका घडे रीहरुमा न उपभो क्ताहरुले घर बनाउन पाएका छन् न त बाटो नै अगाडि बढ्न सके को छ । यस् ता समस् याले काममा ढिलाइ
भएको हो  ।
नगर विकासको काम अब स् थानीय तहमा गइसके काले पनि नगर विकासलाई काम गर्न गाह्रो भयो कि ?
जनप्रतिनिधि आइसके को अवस् था र नगर विकासको काम स् थानीय तहमा जाने भन्ने कुरा राजपत्रमा उल्ले ख भइसके पछि टिकाटिप्पणी हुनु स् वाभाविक नै हो  । दाङमा पनि भए । तर पनि अहिले ऐ न, कार्यविधिहरुको टुंगो लागे को अवस् था छै न । ऐ न, नियम, कानून नबन्दासम्म नगर विकासकै संरचनाले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मे रो भनाइ हो  । जुन दिन ऐ न, कार्यविधि बन्छ र त्यो स् थानीय तहमा आउ‘छ त्यो दिन त हामी स् वतः छो डिहाल्छौ ं नि  ।
कार्यकालभित्र के –के काम गर्नुहुन्छ त ?
नया“ काम गनेर् सवालमा कार्यविधिकै कारणले अघि बढ्न सकिने अवस् था छै न । पुरानै अल्झिएका काम पूरा गरौ भन्ने सन्दर्भमा के ही प्राविधिक समस् याले अहिले सम्म अल्झिएको अवस् था छ । त्यसलाई बो र्ड कमिटीले निर्णय गरे र काम अघि बढाउने तयारी भइरहे को छ । मे रो कार्यकालमा खासगरी त्यस् ता अल्झिएका कामहरुलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा नवलपुर जग्गा विकास कार्यक्रमलाई टुंगो मा पु¥याउन सकिन्छ भन्ने लागे को छ । जस् तो नाला, वाल, कटिङ, फिलिङको कामलाई सक्ने यो जना छ । यति मात्रै हो इन कतिपय ठूला यो जना पनि छन् । जस् तो पार्क, ताल निर्माणको यो जनालाई मे रो कार्यकालमा सम्पन्न गनेर् लक्ष छ । यसै गरी टाउन प्लानिङको सन्दर्भमा पनि थुप्रै काम गर्नुछ । त्यहा“का पुराना बाटा खुल्न सके को छै नन् । खासगरी मिलन चो क हु“दै शहीदमार्ग जो ड्ने सडकलाई खो ल्ने काम मै ले गनेर् छु । त्यस् तै मो हीका समस् या समाधान गनेर् यो जना बनाएको छु । त्यस् तै कतिपय ठाउ“मा उपभो क्ताको हातमा लालपूर्जा छ नक्सा पनि छ तर नाप्दै जा“दा जमिन छै न । यो प्राविधिक समस् यालाई व्यवस् थापन गर्नुपनेर् छ ।
फो हो र सदुपयो ग गदैर् ग्या“स प्लान्ट निर्माण गनेर् भन्नु भएको थियो , कहिले दे खि काम हुन्छ ?
हो , मै ले घो राहीको बसपार्क र सव्जीमण्डीमा गरी दुईवटा ग्या“स प्लान्ट निर्माण गनेर् यो जना बनाएको हो  । यी दुबै ठाउ“मा सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भइसके को छ । लागत र प्लान्टले लिने स् पे शको बारे मा अध्ययन शुरु गरिएको हो  । मे रो कार्यकालमा ग्या“स प्लान्ट निर्माणको काम पूरा गर्छु भन्ने अठो ट छ ।
ग्या“स प्लान्टबाट बिजुली निकाल्ने कि भान्साका लागि मात्रै हो ?
विशे ष गरी बसपार्क र मण्डी लगायत फो हो र उत्पादन धे रै हुने ठाउ‘ हुन् । त्यसै ले फो हो रको व्यवस् थापन पनि हुने र ग्या“सबाट आउने आर्थिक संकलन गरी नगर विकासको आयस्रो त बढाउने यो जना हाम्रो हो  । त्यसै ले अहिले लाई ग्या“स निकाले र हो टलहरुमा बिक्री गनेर् यो जना बनाएका छौ ं ।
दाङलाई प्रदे शको के न्द्र बनाउने बहस चलिरहे को छ । पूर्वाधारका लागि नगर विकासले के ही यो जना बनाएको छ ?
प्रदे शको राजधानी बन्ने सम्भावना बो के को दाङलाई पूर्वाधारको हिसाबले पनि बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि नगर विकासको मात्रै भन्दा पनि समग्र जिल्लाको यो जना चाहिन्छ । जिल्लालाई नै व्यवस् िथत बजारको रुपमा विकास गर्न प्लानिङ गनेर् कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ । नागरिकबाटै जग्गा लिएर भए पनि राजधानीका लागि आवश्यक पनेर् जमिन प्लानिङबाटै उपलव्ध गराउनुपर्छ । नगर विकासको क्षे त्रभित्र त्यस् तो सम्भावना दे खिएका खुला क्षे त्रहरुलाई प्लानिङ गरे र पूर्वाधारको विकास गर्न सकिन्छ जस् तो लाग्छ । सो ही अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, खो जिनुपर्छ ।
नगर विकासले पनि अहिले दे खि नै पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिने कि ?
सार्वजनिक जग्गालाई अधिग्रहण गरे र संरक्षण गनेर् कुरा नै हो नगर विकासले  । तर त्यस् ता ठूलो सार्वजनिक क्षे त्र अहिले नै नगर विकासको कार्यक्षे त्रमा दे खिएको छै न । त्यसै ले गर्दा एउटा प्लान बनाएर त्यस् ता क्षे त्रहरुको खो जी गर्नमा सवै लाग्न जरुरी छ ।
राजधानी हो ला नहो ला तर विकास त चाहिएला ? घो राहीलाई नमूना नगर कसरी बनाउन सकिएला ?
दाङ प्रदे शको राजधानी हुने क्षे त्र हो  । त्यसका लागि आवश्यक बाटो घाटो को कुरा नै सबै भन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो  । घो राही दे शकै उत्कृष्ट नगरपालिका पनि हो  । त्यसै ले यसलाई हरित नगरको रुपमा विकास गनेर् , वृक्षारो पण गनेर् , सुकुम्बासीहरुलाई व्यवस् थापन गरे र खुला क्षे त्रको विकास र संरक्षण गर्न सकियो भने सुन्दर शहर बनाउन सकिन्छ जस् तो लाग्छ ।
अन्त्यमा, के ही छुटे को भए
मै ले मे रो कार्यकालस“गै दुईवटा कामको शुरुवात गरिसके को छु । एउटा आर्मी व्यारे कदे खि पूर्वतिर रहे को चार कट्ठा १२ धुर जग्गालाई नगर विकासको नाममा ल्याएर व्यवस् िथत बाल उद्यान निर्माण गरी चारै तिर व्यावसायिक भवन बनाएर भाडामा दिने कामको शुरुवात र अकोर् आर्मी व्यारे कले अतिक्रमण गरे को झण्डै एक विघा जमिन फिर्ता ल्याएर एउटा व्यवस् िथत हाटबजार सञ्चालन गनेर् मे रो यो जना छ । त्यसको शुरुवात भइसके को छ ।
Previous: थारु संस् कृति जो गाउन समूह गठन
Next: शानपा मेयर कप खुला पुरुष भलिबल
क्याम्पसलाई उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ
कहरले होइन रहरले कर तिर्ने वातावरण बनाउदैछौं